Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Kooxda Lufthansa waxay ku dhawaaqday Maareeyaha cusub ee Air Dolomiti
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Steffen Harbarth oo ah agaasimaha cusub ee Air Dolomiti
Iyada oo ah mid ka mid ah suuqyada muhiimka ah ee kooxda Lufthansa Group, Talyaaniga iyo horumarinta dheeraadka ah ee Air Dolomiti ayaa ahmiyad weyn leh. Steffen Harbarth ayaa ah doorashada ugu fiican ee loolankan cusub marka loo eego waayo -aragnimadiisa baaxadda leh ee maareynta diyaaradaha ganacsiga iyo sida Maareeyaha Maareeyaha oo mas'uul ka ah hababka hawlgalka iyo Maareeyaha La Xisaabtami kara ee Lufthansa CityLine.
Mid ka mid ah labada agaasime maamul ee Lufthansa CityLine ayaa noqon doona Maareeyaha Air Dolomiti bisha Janaayo 2022.
Steffen Harbarth wuxuu baddali doonaa Jorg Eberhart, oo loo doortay "Madaxa Istaraatiijiyadda & Horumarinta Abaabulka" ee Kooxda Lufthansa.
Steffen Harbarth wuxuu xubin ka ahaa Guddiga Sare ee Lufthansa CityLine ilaa Janaayo 1, 2019.
Steffen Harbarth, oo ka mid ah labada agaasime maamul ee Lufthansa CityLine, ayaa noqon doona Maamulaha Air Dolomiti 1da Janaayo 2022.
Wuxuu xilka kala wareegayaa Jörg Eberhart, oo dhowaan loo magacaabay "Madaxa Istiraatiijiyadda & Horumarinta Ururada" ee Lufthansa Groulaga bilaabo 1 Oktoobar 2021. Kabtan Alberto Casamatti, Agaasimaha Guud ee Hawlgallada & Maareeyaha La Xisaabtami kara, wuxuu si kumeel gaar ah u ahaan doonaa maamulaha shirkadda Talyaaniga ee Air Dolomiti ilaa Steffen Harbarth uu ka bilaabo kaalintiisa cusub sanadka soo socda.
Ola Hansson, oo ah Sarkaalka Hawlgalka Lufthansa oo mas'uul ka ah maalgashiga diyaaradda Air Dolomiti, ayaa leh: “Aad ayaan ugu faraxsanahay in Steffen Harbarth uu noo noqon doono mid cusub Air Dolomiti Maamulaha guud. Iyada oo ah mid ka mid ah suuqyada muhiimka ah ee kooxda Lufthansa Group, Talyaaniga iyo horumarinta dheeraadka ah ee Air Dolomiti ayaa ahmiyad weyn leh. Steffen Harbarth ayaa ah doorashada ugu fiican ee loolankan cusub marka loo eego waayo -aragnimadiisa baaxadda leh ee maareynta duulimaadyada ganacsiga iyo sida Maareeyaha Maareeyaha oo mas'uul ka ah hababka hawlgalka iyo Maareeyaha La Xisaabtami kara ee Lufthansa CityLine. ”
Laga soo bilaabo 1 Janaayo 2019, Steffen Harbarth waa xubin ka tirsan Guddiga Sare ee Lufthansa CityLine. Intaas ka hor, Steffen Harbarth wuxuu dhowr jagooyin maamul ka qabtay Kooxda Lufthansa. Tusaale ahaan, xaruntii Lufthansa ee Munich wuxuu mas'uul ka ahaa maareynta ganacsiga iyo hababka suuqgeynta ee Lufthansa Hub Airlines, taas oo raacday jagadiisii ​​Madaxweyne Ku-xigeenka Iibka ee Lufthansa Group Airlines ee Asia-Pacific.
Shirkadda Air Dolomiti SpA waa diyaarad goboleed Talyaani ah oo xafiiskeeda ugu weyn ku leh Dossobuono, Villafranca di Verona, Italy, oo saldhigeedu yahay Madaarka Verona Villafranca iyo magaalooyinka diirada saara Madaarka Munich iyo Madaarka Frankfurt ee Jarmalka. Air Dolomiti waa shirkad iska leh Lufthansa.
The Kooxda Lufthansa (sharci ahaan Deutsche Lufthansa AG, oo sida caadiga ah loo soo gaabiyo Lufthansa) waa diyaaradda ugu weyn Jarmalka oo, marka lagu daro kaabayaasheeda, ay tahay diyaaradda labaad ee ugu weyn Yurub marka loo eego rakaabka la qaado.
Kooxda Lufthansa waxaa ka mid ah Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines iyo Brussels Airlines. Eurowings iyo “iskaashatada gobolka” ee Lufthansa ayaa iyaguna ah xubno kooxeed. Sababtoo ah masiibada COVID-19 shirkadu qayb ahaan waxay leedahay dawladdu ilaa Luulyo 2020.